Ex-lover Threatens To Kill Top ZANU PF Official
ZANU PF Makoni district committee chairperson Albert Nyakuedzwa‘s ex-girlfriend has threatened to kill him for ending the relationship.
Nyakuedzwa has approached Rusape Magistrates Court seeking a peace order against Tariro Faith Mhondiwa.
Wairaira yemunhu we ZANU PF haudi kuirega🤣🤣🤣
Rudado the graduate 3 months ago
MaZanu tagara hatimadi, Ex_lover killer hako haisi prexxa.
Isu tiri kuncoti dai apinda hake mukomana weCCC chero nhasi chaiye☝️
Mhondiwa gadzira munhu size. Ajaiyira kuhwanda ne Zanu.
Extramarital ,,,hazviperi mushe
Tonderai 3 months ago
😹😹😹😹😹 nyaya dzekupenga idzi
Majaira kudya mari dzekumanicaland nemahure ekucheers 3 months ago
ndozvamajaira kushandisa vana vevanhu